Semalt Inoratidza Kuti CTR Inotaura Sei KuWebhu Page Peji yako
Munhu wese anoda kubudirira mukutengesa kwemaInternet angave achishamisika kuitika kwehupenyuchovha-kuburikidza nemari (CTR). Kuwanda kwevatengesi uye vanhu varikuita kuongororwa kwemaitiro, edza kubudisa varwi venyu nekuteveraSEO maitiro. Zvisinei, Google mvumo nemakwikwi ekukwikwidzana hazvizivikanwe pakarepo kana vasingatauri maitiro ehurongwa hwavopachena. Asi zvatinonyatsoziva ndezvokuti CTR inobata hutsika sechinhu chisina kujeka.
Zvisinei, mamiriro ekutengeserana kwepaIndaneti anounza mufananidzo wakasiyana - network performance assessment	in portland. Somuenzaniso, kutonga kweCTRNhamba yeGoogle yezvinhu. Vatengesi vakawanda vedigari vanoedza kushandisa zvakanyanya izvi. Muchikamu chino, Jason Adler, Kubudirira KwevatengiManager of Semalt inoratidzira zvakasiyana-siyana pakati peCTR uye kushandura, kutsanangura kuti ivo vanobviswa sei. Panewo mazano anobatsira achakubatsira iweNhamba yeGoogle-kuburikidza nehuwandu (CTR) inoita zvakanaka paSERPs yehupenyu.
Nzira yeCTR inobatsira sei kusarudzwa
Kukurukura mawebhusayithi zvakajeka, panofanira kuva nemitemo yekuisa mawebsite mukatiurongwa. Nokudaro, Google inoshandisa ruzivo rwakadai sokusarudza deta. CTR inokanganisa kuvhara kwekutsvaga kweSERP. Somugumisiro, mawebsite ane gurunhamba yekutsvaga yakagadzirirwa kumusoro, asi avo vane zvishoma zvishoma vanoiswa pasi. Algorithm inotarirwa kuongorora zviri mukatiine nhamba yakawanda yezvinyorwa zvakakodzera..Kazhinji injini dzekutsvaga dzinoshandisa izvi zvinyorwa mukutsvakurudza kwavo maitiro. Google iri kukurudzira vanoblogikuti ave mukuru muhutano zvakakosha. Sezvo huwandu hunoenda huchigadzikana, kutengesa kunoitika. Izvi zvinyorwa zvinoita kuti webhusaiti iwane mubairo wezvakanakachiyero chinobva chaita kuti SEO yako igone.
Chechipiri, Google inotarisana neCTR senzira yekuratidzira OneBox. Awebsite yepaiti inofanirwa kuva neCTR miniti yekuwana OneBox pawebsite yavo. Google ine yega yega inotaridzika inotarisa kudarika-kuburikidza nemari(CTR) neOneBox mharidzo pamubvunzo. Ichi chiitiko chinogona kutsanangura zvimwe zvekuchinja kwemwaka panguva yekunyorwa kweimwewebsite kana peji. Somuenzaniso, peji yewebhu inogona kuita zvakanaka nhasi asi kwete iyo inobudirira mangwana. Somugumisiro, vatengesi vedhizhaanofanira kushandisa kukosha sechinhu chinokosha. Kuchengetedza CTR yako kunogona kuchengetedza webhusaiti kunyoresa zvakanaka zvakanaka muzvinjini.
Webhusaiti yacho inofanira kunge yakanyatsotsvaga kuburikidza nehuwandu. Nzvimbo yekutambira inokoshakuti uwane ruzivo rwunoda kushandiswa. Zvakakosha kuve nechokwadi kuti vanhu vanodonha chibatanisi kune webhusaiti yako vanobatana nachokunyanya nguva. CTR inovandudza simba rako repamusoro kuburikidza nekuenderana, izvo zvinovandudza mararamiro ako. Nokuda kweCTR kuti iwane zvakanakisisakunze kweSEO, mumwe anofanirwa kuronga mawebsite ane zvinyorwa zvakanaka mumazita uye meta tags. Google inotarisa mawebsite kubva pane zvakakosha zvakocontent. Zvinyorwa zvinowanikwa nechokukwirira kuburikidza nehuwandu. Google algorithm inoshandisa chinhu ichi kusiyanisa chinzvimbo chaichosite yakakodzera.
Vatengesi paIndaneti vanogona kukakavadzana nekusingaperi maererano neGoogle CTR ine simbakutsvaga injini mhinduro kana kwete. Ichokwadi ndechokuti CTR, chokwadi, inobatsira webhusaiti kuti ive yepamusoro yepamusoro. Zvisinei, zvingava zvakaoma kunzwisisa uhupakati peCTR ne SEO. Tinotarisira kuti nyaya ino yakakubatsira iwe kuti unzwisise ukama huri pakati pemakadzi maviri aya uye nziraiwe unogona kuita kuti Google yako inyore-kuburikidza nemitengo (CTR) inoita zvakanaka pane organic SERPs.